IBhayibhile Yokuqala—Ibali Elibalulekileyo
IBhayibhile Yasinda Ekonakaleni
IBhayibhile Yasinda Kwinkcaso
IBhayibhile Yasinda Kwimizamo Yokutshintsha Oko Kubhalwe Kuyo
IBhayibhile iphuma yodwa kwiincwadi zonqulo. Ayikho enye incwadi eye yanefuthe kwiinkolelo zabaninzi kangangexesha elide njengayo. Kwangaxeshanye ayikho enye incwadi eye yacikidwa yaza yagxekwa njengayo.
Ngokomzekelo, abanye abaphandi bathi kuyathandabuzeka ukuba iiBhayibhile zakutshanje zikhutshelwe ngendlela echanileyo kwimibhalo yokuqala. Omnye uprofesa wezonqulo uthi: “Asinakuqiniseka ukuba siye sayikhuphela ngendlela echanileyo imibhalo yokuqala. Ekuphela kwento esinayo ziiBhayibhile ezigcwele ziimpazamo yaye uninzi lwazo lwakhutshelwa emva kwamakhulu eminyaka yenziwayo imibhalo yokuqala ibe zahluke kuyo ngeendlela ezingamawakawaka.”
Abanye baye bathandabuza ukuchana kweBhayibhile ngenxa yemvelaphi yabo yonqulo. Ngokomzekelo, uFaizal wafundiswa yintsapho yakhe engengomaKristu ukuba iBhayibhile yincwadi engcwele kodwa iye yatshintshwa. Uthi: “Ngenxa yoko, ndandingakhululeki ncam xa kukho umntu ofuna ukuthetha nam ngeBhayibhile. Ndandisithi zange babe nayo naloo Bhayibhile yokuqala. Le banayo itshintshiwe!”
Ngaba ibalulekile into yokuba iBhayibhile itshintshiwe okanye ayitshintshwanga? Khawucinge ngale mibuzo: Ngaba unokuzithemba izithembiso zeBhayibhile zekamva ukuba awuqinisekanga ukuba zazikho kwimibhalo yokuqala? (Roma 15:4) Ukuba ngokwenene iiBhayibhile zanamhlanje ibiziikopi nje ezingachananga ezibhalwe ngabantu, ngaba ubuya kuyisebenzisa ukwenza izigqibo ezibalulekileyo eziphathelele impangelo, intsapho okanye unqulo?
Nangona iincwadi eyayibhalwe kuzo iBhayibhile kuqala zingasekho, sinokusebenzisa ezamandulo—eziquka imibhalo-ngqangi yeBhayibhile engamawakawaka. Loo mibhalo-ngqangi yasinda njani ekonakaleni, kwinkcaso, nasekutshintshweni kwezinto ezibhaliweyo? Ukusinda kwayo kungakunceda njani uyithembe ukuba iBhayibhile onayo ichanile? Khawuve iimpendulo zale mibuzo kweli bali lilandelayo lokusinda kweBhayibhile.